my old days (ခ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖော် မသူတော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » my old days (ခ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖော် မသူတော်
my old days (ခ) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖော် မသူတော်
Posted by မောင် ပေ on Jun 26, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
25.6.2011 တွင် ကိုရွှေဘိုသား တင်သည့်
ဆိုသည့် ပို့ စ် ကို ဖတ်ရသည် ။ ထို ပို့ စ် အောက်မှ ကွန်မင့် များထဲ တွင်မှ ကိုနေဝန်းနီ ၂၆.၉.၂၀၁၀ တုန်းက တင်ထားသည့်
ကိုပါ ဆက်လက် ဖတ်ဖြစ်သွားသည် ။ သို့ နှင့် ကျွန်တော် လည်း စဉ်းစားစရာ အတွေးများစွာ ဝင်လာသည် ။ အတိတ်နေ့ များ ကို ပြန်သတိရမိသည် ။ ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် အင်တာနက် စသုံးဖြစ်တာ က 2007 တွင် ဖြစ်မည် ထင်သည် ။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ ထွက်ကာစ ( ပေတေလွန်း သဖြင့် ကျောင်းမှ မထုတ်မှီ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ထွက်ခဲ့သည် ) လူက လျှောက်သွားနေမိသည် ။ စီးပွားရေးလည်း မလုပ်သေး ချိန် ။ အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံ ရလျှင် ကွန်ပျူတာ ဆိုသည်မှာ မောင်ပေ့ အတွက် ဂိမ်းဆော့ခြင်း သာ သိခဲ့သည် ။ အဘယ်ကြောင့် အင်တာနက် သုံးမိသွားသလဲ ဟု ဆိုလျှင် ထိုစဉ်အချိန်ကပေါ့နော် မောင်ပေ ပေါင်းဖြစ်သည့် ဘော်ဒါ များမှာ ရပ်ကွက်ထဲရှိ ကွမ်းယာဆိုင် မှ ကွမ်းယာသည် သားအဖ နှင့် ထိုနားမှ ဆိုက်ကားသမားများ ၊ ဂျာနယ် သည် များ ။ သူတို့ တွေ သည် တစ်ခါလာလည်း အင်တာနက် ၊ တစ်ခါလာလည်း အင်တာနက် ထဲ ရှိ ဇါတ်ကားများ အကြောင်း ၊ တစ်ခါလာလည်း အင်တာနက်ဆိုင်လာသည့် ကောင်မလေး များ လှသည့်အကြောင်း ။ သို့ နှင့် ပေတေနေသူ မောင်ပေ သည်လည်း အင်တာနက် ဆိုင် ထဲ သို့ ယောင်တောင်ပေါင်တောင် နှင့် ရောက်ရှိခဲ့သည် ။ မောင်ပေ ကံကောင်းသည် မှာ မောင်ပေ ပထမ ဆုံး သုံးခဲ့သည့် ဆိုင် မှ ဝန်ထမ်းကောင်လေး ၂ ယောက်မှာ မောင်ပေ နှင့် ရွယ်တူ များ ဖြစ်သဖြင့် ။ ဘာမှ မသိ ဘာမှ မတတ်သော မောင်ပေ့ အား ဘယ်လို ဘယ်ပုံ ဆိုတာ သင်ကြားပေးခဲ့ကြသည် ။ ဂျီတော့ အကောင့် ပြုလုပ်ပေးသည် ။ မေးလ် အသုံးပြု နည်း များ သင်ပေးခဲ့သည် ။ ဂျီတော့ အကောင့် ရရှိသွားသော မောင်ပေ သည် ချက်တင်း ထိုင်သည် ဆိုသည် မှာ ဂျီတော့ အကောင့် ရှိရုံ နှင့် ထိုင်လို့ ရသည် ဟု ထင်မိခဲ့သည် ။ အင်တာနက် သုံးခြင်း ကို ပညာရေး ၊ သတင်းဆောင်းပါး လူမှုဆက်သွယ်ရေး စသည့် ဘက်က သုံးဖို့ မသိရှိခဲ့သေးသော အချိန် ။ ပထမဆုံး ချက်တင်း က MIRC chat room တွင် သုံးခဲ့သောကြောင့် Gtalk ကို လည်း MIRC ကဲ့သို့ မှတ်နေခဲ့ ရာ ဆိုင်ရှိ ဝန်ထမ်း ကောင်လေး များ က ရှင်းပြ မှ ၊ တစ်ဘက်လူ လိပ်စာ ကို ကိုယ်က invite လုပ်မှ ၊ တစ်ဘက် မှ accept လုပ်မှ ချက်တင်း ထိုင်လို့ရမည် ဟု သိသွားသည် ။ သို့ သော်လည်း ထိုအချိန်ထိ မောင်ပေ့ အကောင့်ထဲ တွင် ချက်စရာ တစ်ယောက် မှ မရှိ ။ သို့ နှင့် အမျာသူငှါ ချက်တင်း ထိုင်သလို ထိုင်ချင်သူ မောင်ပေ သည် လည်း မန်းရတော့သည် ။ မြို့ တွင်း ရှိ အင်တာနက် ဆိုင်ပေါင်းများစွာသို့ သွားသည် ။ ဆိုင်တွင်းသို့ ရောက်ပြီ ဆိုလျှင် ထိုင်သုံးနေသည့် ကောင်မလေး များကို ရှာသည် ။ လှပေ့ ချောပေ့ ဆိုသည့် ကောင်မလေး များ ကို တွေ့ လျှင် သူ့ ဘေးနား က စက်အားသည် အထိ စောင့်သည် ။ အားလျှင် တန်းထိုင်သည် ။ ထို့ နောက် မသိမသာ တစ်မျိုး သိသိသာသာ တစ်မျိုး သူမ ဂျီတော့ အကောင့်ကို မြင်အောင် ကြည့်သည် မှတ်သည် ။ ထို့ နောက် invite လုပ်တာပေါ့ ဗျာ ။ လက်ခံပြီး ဆိုတာ နဲ့ ချက်တော့တာပေါ့နော် ( မရယ်ကြပါနဲ့ နော် ၊ ဒါ ငယ်တုန်း က လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်၊အခု တော့ မလုပ်တော့ပါဘူး ။ ကိုယ့် အလုပ်နဲ့ ကိုယ် အချိန်ကို မရဘူး ) ။ သို့ နှင့် မောင်ပေ့ အကောင့်ထဲ တွင် မိန်းမလှ လေး များ အကောင့်များဖြင့်သာ ပြည့်နှက်နေသည် ။ သူတို့ နာမည်တွေ လိပ်စာတွေ ဖုန်းနံပါတ် တွေ ဘက်ဒေး တွေ ကို လည်း သေချာ မှတ်ထားပေးရသည် ။ ရံဖန် ရံခါ မောင်ပေ ငွေယားလေး ပေါ ချိန် မျိုးတွင် သူမ တို့ နှင့် အပြင်မှာ တွေ့ ဆုံ စားသောက် လျှောက်လည် ခဲ့တာပေါ့ ။ ရည်းစား…လား ဆိုတော့ ၊ ရခဲ့တာပေါ့နော် ..။ ဂျီတော့ ကနေ ရည်းစားအချို့ ရခဲ့ပါတယ် ။ ( ရည်းစားတွေ ဘာတွေ ရခဲ့တယ် ဆိုလို့မောင်ပေ့ ကို တစ်မျိုးမထင်ကြပါနဲ့ ဦး ဗျာ ။ အခုချိန်ထိ ကိုယ် မယူနိုင်ပဲ နဲ့ ဘယ်သူ့ သမီးပျို ကို မှ ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကျူးလွန်ခဲ့ဖူးပါကြောင်း ။ မောင်ပေ သည် ကောင်မလေး များ ထားခဲ့ခြင်း ကို ခံခဲ့ရသော လူပျိုကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်ပါကြောင်း ) ဘယ်လောက်ထိ ကြုံတွေ့ ဖူးသလဲ ဆိုရင် အဲဒီတုန်း က ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ထဲ မှာ တစ်ခုလပ် မမ တစ်ယောက်လည်း ပါသည် ။ သင်္ကြန်ရက်တွင်း သူမ အိမ်တွင် သူငယ်ချင်း များ နှင့် အတူပျော်ပါး ကြမည် ဖြစ်သဖြင့် မောင်ပေ့ ကို လည်း လာနေ လာပျော်ပါး ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံ ရသည် ။ သို့ သော်လည်း မောင်ပေ မသွားခဲ့ပါ ၊ နောက်တစ်ယောက် က ကြတော့ သူမ ချစ်သူ က နိုင်ငံခြား မှာ အလုပ်သွားလုပ်နေသည် ။ နောက် ၂ နှစ်လောက် မှ ပြန်လာမည် ။ ဒီကြားထဲ မောင်ပေ နှင့်တွေ့ သည် ။ မောင်ပေ ပုံမှန်အတိုင်းသာ ။ များသော အားဖြင့် မောင်ပေ့ ဂျီတော့ ထဲတွင် ရှိသူ များမှာ ၁၀တန်း အောင်ပြီးကာစ နှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ များ သာ ဖြစ်သည် ။ ထိုမှ တစ်ဆင့် Hi5 ၊ friendster တို့ သုံးဖြစ်ခဲ့သည် ။ သို့ သော် နောက်ပိုင်း facebook သုံးဖြစ်သည့်အချိန် တွင် facebook ကိုသာ သုံးဖြစ်တော့သည် ။ ထိုစဉ် ကာလ များက မောင်ပေ့ နေ့ စဉ် အလုပ် မှာ အင်တာနက် ဆိုင်သို့ ပုံမှန်သွားသည် ။ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲ စရာ ရှိလျှင် ဆွဲသည် ။ MIRC တွင် ချက်သည် ။ MIRC တွင် ဂျီတော့ အကောင့် တောင်းသည် ။ ဂျီတော့ တွင် ဆက်ချက်ကြသည် ။ အရေမရ အဖတ်မရ ပေါ့ ။ ဂျီတော့ တွင် ရင်းနှီးသွားပါ က တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ဖုန်းနံပါတ်များ ဖလှယ်ကြသည် ။ ဖုန်းတွေ အပြန်အလှန်ဆက်သည် ။ ထိုမှ တစ်ဆင့် တိုးတက်လာလျှင် ဓါတ်ပုံတွေ ပို့ ကြ ။ ပုံတွေ ကြည့်ပြီး လက်ခံနိုင်သည် ဆိုလျှင် အပြင်မှာ တွေ့ ကြ ။ ရည်းစားစကား ပြောကြ ။ ရည်းစားဖြစ်သွားကြ ။ ရည်းစား ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက် နှင့် တစ်ယောက် ဂျီတော့ အကောင့်များ ဖလှယ်ကြ ။ ထိုအခါ ဂျီတော့ထဲ မှ ယခင် ဇါတ်လမ်းများ ကို တွေ့ ရှိသွားကြကာ ခွာပြဲကြ နှင့် တော်တော်တော့ အလုပ်များခဲ့သည် ။ ယခုချိန် ပြန်တွေးကြည့်သော အခါ ထိုစဉ်ခါ က ကုန်ခဲ့သော ဖုန်းဖိုးများ ကို နှမြောမိသည် ။ ထိုစဉ်ကာ ဖြုံးခဲ့မိသည့် အချိန်များ ကို နှမြော မိသည် ။ သို့ သော်လည်း စိတ်ထဲမှာ ပျော်ခဲ့ရတာ တော့ အမှန်ပါ ။ နောက်ပိုင်းကြ .ning.com များ ပေါ်လာချိန်တွင် စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်လုပ်မည့်အလုပ် နှင့်ပတ်သက်၍ ပုံများ ဈေးနှုန်းများ ကို တင်ဖြစ်ခဲ့သည် ။ သို့ သော် ထို .ning.com များ မှာ အလကားအစမ်းပေးသုံးသည့် သဘောမျိုး ဖြစ်၍ ကြာရှည် မခံ ခဲ့ပါ ။ ထိုသို့ တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အင်တာနက်စွဲသူ တစ်ဦး ဖြစ် ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ရာ တစ်ရက် တွင်မူ မောင်ပေ သုံးနေကြ အင်တာနက် ဆိုင်ပိုင်ရှင် နှင့် မောင်ပေ စကားထများတော့သည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ မောင်ပေ အင်တာနက် မသုံးဖြစ်တော့ပဲ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ သော မောင်ပေ ဖြစ်လာခဲ့သည် ။ စီးပွားရေး လုပ်ပြီ ဆိုတော့ ကာ ပင်ပန်းမှု အပန်းဖြေ စေဖို့ ရန် စိတ်ပြေလက်ပျောက်နည်း အမျိုးမျိုး ရှာခဲ့သည် ။ နောက်ဆုံး တွင် အလုပ်ပြီး သည် ဆိုသည်နှင့် net game ဆိုင်သို့ မောင်ပေ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည် ။ မောင်ပေ သွားသည့် ဂိမ်းဆိုင် မှာ အင်တာနက် ပါ ချိတ်ထားသဖြင့် အင်တာနက် ပြန်လည် သုံးဖြစ်သည် ။ ဂျီတော့ အကောင့်သစ် တစ်ခု ထပ် လုပ် ကာ ချက်တင်းလည်း ထိုင်ဖြစ်သည် ။ သို့ သော် ယခင်လို တော့ မလုပ်တော့ပါ ။ ယခု မောင်ပေ့ ဂျီတော့ ထဲ တွင် ရှိသူများမှာ မောင်ပေ့ ငယ်သူငယ်ချင်းအကောင့်များ၊ ကြီးမှ ခင်သူ ၊ စီးပွား လုပ်ဖော် ကိုင်ဘက်များ ၏ အကောင့်များသာ ရှိတော့သည် ။ အင်တာနက် ပြန်လည် သုံးဖြစ်ခဲ့ရာ မှ တစ်ရက်တွင် MG ထဲသို့ဝင်ဖတ်မိခဲ့သည် ။ ထိုအချိန်မှ စ၍ MG ကို ကြိုက်နှစ်သက်သွားပြီး ယခုလို ရွာသား တစ်ဦး ဖြစ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ။ မောင်ပေ ထိုင်နေကြ ဂိမ်းဆိုင် မှာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလေး မျာ နှင့် အပြည့် ။ ဆိုင်သို့ ရောက်ပြီ ဆိုလျှင် သူတို့ ပြောနေကြ သော ချိန်းတွေ့ ကြခြင်း ဇါတ်လမ်းများ ၊ ချက်နေကြသော အကြောင်းများ ကို ကြားရသော အခါ မောင်ပေ တစ်ယောက် ပြုံးမိသည် ။ အံ့သြ မိသည် ။ တစ်ခါ တစ်ရံ လူမဆန်သော လုပ်ရပ်လေး များ ကို လည်း ကြားရသည် ။ သို့ သော် မောင်ပေ နှင့် မဆိုင်ဟု ဇွတ်ဆုံးဖြတ် ကာ မောင်ပေ ငြိမ်နေသည် ။(မနေနိုင်လို့ သွားပြော ချာတိတ်များ က မောင်ပေ့ ချဉ်သွားကြမှာ ကို ကြောက်သည် ) အဘယ်ကြောင့်နည်း ။ ခင်ဗျား တုန်း က လဲ ကဲခဲ့မှာပဲ ဟု ပြန်ပြောကြမှာ သေချာသည် ။ကိုယ့်တုန်း က လည်း ဒီလို ချက်တင်း ထိုင်ခဲ့ ၊ ချိန်းခဲ့တာပဲ ။ ရည်းစားလဲ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ ။ သို့ သော် ကိုယ့်တုန်း က တော့ ကိုယ် က စောင့်ထိန်းသင့်သည် ကို စောင့်ထိန်းခဲ့သည် ။ ယခု တွေ့ ရသော လူငယ်တော်တော်များများ သည် စောင့်ထိန်းသင့်သည် ကို မစောင့်ထိန်း ကြ ။ ငယ်ရွယ်သေးလို့ လည်း ဖြစ်နိုင်သည် ။ မကြုံဖူးသော အထိအတွေ့ ကို တွေ့ ဆုံရချိန် သာယာသွားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည် ဟု ထင်သည် ။ သူတို့ အတွေး တွင် ဒီမှာ တွေ့ တယ် ။ အပြင်မှာ တွေ့ တယ် ။ ပြီးရင် ငြိမယ် ။ ပြီးပြီးရော ဟု သဘောထားနေကြသည့် ပုံစံ မျိုး ။ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ကြ ။ ရံဖန်ရံခါ ဆိုလျှင် မိန်းကလေး ဘက်မှ လွန်သည် များ ကို လည်း တွေ့ ရှိမိသည် ။ ကောင်လေး က ဂိမ်းဆိုင် ထဲ တွင် သူ့ ဘာသာ သူ ဂိမ်းဆော့နေသည် ကို ညကြီးမိုးချုပ် အဆောင်ပြန်လို့ မရတော့ ဟု ဆိုကာ လာခေါ်သည် များကို လည်း တွေ့ ဖူးသည် ။ ကောင်လေး တွေ က ရော တဲ့….အင်း အဲဒီလိုတွေ ပါပဲ ။ နိုက်ကလပ် များ ခေတ်ထ လိုက်တုန်းက ဆိုလျှင် ပိုဆိုးသည် ။ မောင်ပေ တို့ မန်းတလေး ရှိ နာမည်ကြီး အဆောင်၃ခု လောက် ဆိုလျှင် အဆောင်ပိတ်ချိန် ကို ည ၁၀ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးရသည် အထိ ဖြစ်ခဲ့သည် ။ သူတို့ လေး တွေ ၏ ဂျီတော့ ကပ်စတမ် မက်ဆေ့ များ ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်မည် ဆိုလျှင် ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက် ဘယ်ချိန် ဘယ်နေရာ မှာ ဒီဂျေ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖျော်ဖြေမယ့် ကလပ် ရှိမယ် ။ ယောက်ျားဝင်ကြေး ဘယ်လောက် ၊ မိန်းမ ဆို ဘယ်လောက် စသည်ဖြင့် ပေါ့ဗျာ ။တက္ကသိုလ်များ ၊ လဘက်ရည်ဆိုင် များ ၊ ကော်ဖီဆိုင်မျာ ၊ ဂိမ်းဆိုင်များ တွင် ကြေငြာ ပန်းဖလက် စာရွက်များ လိုက်ကမ်းသည် ။ ထားပါတော့ ဗျာ ။ ကျွန်တော်လည်း ပေတော်တော်ရှည်နေပြီ ။ အကြောင်းအရာ လေး တစ်ခု ကို ပြောရင်း အဆုံးသတ်တော့မယ် ဗျာ ။ ဒီလိုဗျာ တစ်ရက် က ပေါ့… ဆိုင်ထဲ မှ ချာတိတ် တစ်ယောက် က အကောင့်တစ်ခု ကို ချက်ကြည့်ပါ ဟု ဆိုကာ လာပေးသဖြင့် invite လုပ်လိုက်သည် ။ ချက်ချင်း တန်း accept လုပ်သည် ။ အကောင့်နာမည် က star.cyberqueen.babe@gmail.com ။ ကျွန်တော့် စာကို ဖတ်နေသူ အကိုတို့ ဦးလေး တို့ ညီငယ် တို့ ဒီအကောင့် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြုံဖူးရင်လည်း သည်းခံ ပြီး ဖတ်ပေးပါ ။ မကြုံဖူးသေ ရင်တော့ သေချာ ဖတ်ကြည့်ပါ ဗျာ ။ star.cyberqueen.babe နဲ့ စချက်သော အခါ မိန်းမ၊အမျိုးသမီး ဟု သိရသည် ။ နာမည် မေးတော့ မခိုင် တဲ့ ။ ဘယ်က လဲ ဆိုတော့ ရန်ကုန် က တဲ့ ။ သူမ ဂျီတော့ တွင် တင်ထားသော ပုံမှာ အမျိုးသမီး တစ်ယောက် ၏ တုံးလုံး ပုံ ။ မျက်နှာ မပါ ပါ ။ သူမ က web cam ရှိလား လို့ ဇွတ်မေးသည် ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ vzo ချက်ချင် လို့ တဲ့ ။ ဒါနဲ့ ဘာလို့ vzo ချက်ချင်တာလဲ လို့ မေးလိုက်သော အခါ vzo ချက်မမည် ဆိုလျှင် တဲ့ သူမ က သူမ ၏ တစ်ကိုယ်လုံး တုံးလုံးချွတ် အနေ အထား ကို ပြမည် တဲ့ ။ ကျွန်တော် က သူမ ကို “မာစတာဗေးရှင်း ” ပြန်လုပ်ပြရမည် တဲ့ ။ ဒါနဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူး လို့ ။ မင်းကြည့်ရတာ ပြည့်တန်ဆာမ နေမှာလို့ ။ မလုပ်ပြနိုင်ဘူး လို့ ပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ဆဲ သွားပြီး ဘလော့သွားသည် ။ သို့ နှင့် အင်တာနက် အမြဲသုံးသူ အသိ တစ်ယောက် ကို အဆိုပါ အကောင့်ကို ပြောပြကာ မေးမြန်းကြည့်တော့ ဘလော့သွားတာ ကောင်းတယ် တဲ့ ။ star.cyberqueen.babe ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင် က ယောက်ျားလား မိန်းမ လား မသေချာ ဘူးတဲ့ ။vzo ထဲမှာ မြန်မာ မ တစ်ယောက် ရဲ့ တုံးလုံးချွတ် အိုင်တင်အမျိုးမျိုး ပြနေပုံ ကို တွေ့ ရတဲ့ ရုရှားက ကောင်လေး သုံးယောက် ဆိုရင် ဒီအကောင့် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ကယ်မှတ်လို့ မာစတာဗေးရှင်း လုပ်ပြ ကြတဲ့ အခါ ။ အဲဒါ ကို record လုပ်ပြီး gay site မှာ သွားတင်သတဲ့ ။ သို့ နှင့် တစ်ရက်ကြ တော့ net game ဆိုင် ထဲ ဝင် ချာတိတ်လေး များ ရဲ့ အော်သံ ကြားလိုက်ရပါတယ် ။ ဟေ့ကောင် ဒီနေ့ ည ၁၁ နာရီ မခိုင် နဲ့ vzo ချက်ဖို့ ငါ ချိန်းထားလို့ အိမ်ကို ပြန်သုံးမယ် တဲ့ ။ အိမ်က ချက်မယ် ဆိုတာ နဲ့ ။ ညီလေး ….မင်း မခိုင် ဆိုတဲ့ အကောင့်နာမည်လေး အကို့ ကို ပြနိုင်မလား လို့ မေးလိုက်တော့ သူ ပြလာတာ star.cyberqueen.babe ပဲ ဖြစ်နေတယ် ။ ဒါနဲ့ကျွန်တော် လည်း ဒီလို ဒီလို ရှိတယ် လို့ ဆိုလိုက်တော့ ချာတိတ် က မယုံဘူး ။ ဆိုင်ထဲ က အချို့ ကြုံဖူးတဲ့ ချာတိတ် များ က လည်း ဝင်ပြောကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် လည်း ယုံကြည် ပုံ မရတဲ့ ချာတိတ်ဟာ ……………..။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့် ရဲ့ old days ပေါ့နော် ။ ရွာထဲ က အကိုတို့ အန်ကယ်တို့ ညီငယ် တို့ လည်း star.cyberqueen.babe ဆိုတာ နဲ့ ပတ်သက်လာမယ် ဆိုရင် သတိထား ကြဖို့ သတိလေး ပေးလိုက်ပါရစေ နော် ။ အားလုံး ကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
ကိုတော်ကာလည်းအတွေ့အကြုံတော့စုံသား။ အပြင်မှာပါခင်ခြင်ပါတယ် ဘာလို.လဲဆိုတော့ Type ချင်း
ကဲ ရွာထဲက မန်းလေးသူမန်းလေးသားတွေလည်းစုပြီးတွေ့ရင် မကောင်းဘူးလားဗျာ။
ဒါမျိုးလေးတော့တခါမှ မကြားဖူးသေးဘူး၊ ဗဟုသုတရပါတယ်။ wintalker သာ မာစတာဗစ်ရှင်းလုပ်ပြလိုက်ရင် MG ဆီရောက်လာမလားမသိဘူး။ :)။ account ပေးတဲ့ချာတိတ်က ဘာသဘောလဲမသိဘူး။ သူကတော့ ဒီ account အကြောင်း ကောင်ကောင်းသိမှာပေါ့။
ကိုကား က ဘယ်မြို့ ကများပါလိမ့် ။ အန်ကယ်ပေါက် နဲ့ ကျွန်တော် နဲ့ က တော့ မန်းတလေး မြို့ ကပါ ။ တွေ့ မယ်ဆို လည်း အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာအောင် စီစဉ်ကြတာပေါ့ဗျာ
အင်တာနက် သုံးတာတော့ ကြာပေါ့..
အစ သုံးခါစ တုန်းက ချက်တင်က စပြီး သုံးကြည့်ရတာပဲ.. နောက်တော့.. ဟို ကလိ ဒီကလိ… အခုတော့ ချက် ဆိုတာကို စိတ်ကို မပါတော့ဘူး။
တနေ့ တနေ့ ရွာထဲမှာ အချိန်ကုန်နေတော့တာပါပဲ။
ကဲ မန်းလေး သားတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိမလဲ မသိ
ဒါဆို ဘွားဆူး နဲ့ အနော်နဲ့ အဖြစ်ချင်း တူနေပြီ ။ အခုဆို ဖေ့ဘုတ် တောင် မသုံးဖြစ်တော့ဘူး ။ ကစားနေကြ online game torncity တောင် သိပ်မဆော့ဖြစ်တော့ဘူး ။ ရွာထဲ မှာ ပဲ ဘယ်သူတွေ ပို့ စ်အသစ်တင်လဲ စောင့်ဖတ်ဖြစ်နေတယ် ။
သုံးယောက်တော့ရပြီ ကဲ မန်းလေးမှာနေသူတွေဆက်ပြီးမှကြေငြာကြဗျာ။
ပီ ပီ ပီ ………………………………….
ကြောင်ကြီးလည်း မာစတာဗွီးရှင်း လုပ်ပြမယ်။ ကြည့်ကြမလား…
မာစတာ – အရှင်သခင်
ဗွီးရှင်း – အမြင်
မန်းလေး မှာ နေတာတော့ ဟုတ်ဖူး …. ဒါပေမဲ့ ရွာထဲက လူတွေကို အပြင်မှာ တွေ့ဖူးချင်တယ် ။
စင်ကာပူမှာ ရော အဲလို ရွာထဲက လူတွေ တွေ့ဆုံပွဲ လုပ်ဖို့အစီအစဉ်လေး ဘာလေး မရှိဘူးလား ဟင် ။
Senior Villager တွေ စီစဉ်ပေးကြပါအုံး နော် ….